Migadra Noho ny Finoany Ireo Vavolombelon’i Jehovah any Turkménistan
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nahazo famotsoran-keloka tamin’ny fanjakan’i Turkménistan ny Vavolombelon’i Jehovah valo, tamin’ny 22 Oktobra 2014. Tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany izy ireo na nendrikendrehina ho nanao zavatra tsy nataony. * Nafahana koa Rtoa Bibi Rahmanova, Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2 Septambra 2014. *
Nandefa taratasy fankasitrahana tany amin’ny Filoham-pirenen’i Turkménistan ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, noho ilay famotsoran-keloka sy fanafahana an’ireo Vavolombelona nigadra. Noresahina tao amin’ilay taratasy koa hoe mbola misy Vavolombelona roa migadra ary tokony hafahana. Faly ny Vavolombelon’i Jehovah fa afaka mifampiresaka amin’ny manam-pahefana any Turkménistan. Afaka mitady vahaolana izy ireo amin’izay rehefa misy zavatra mampanahy sady mba tena hajaina ny zony.
Mbola tsy voavaha ny olana momba ny fahalalahana hanaraka ny feon’ny fieritreretana sy ny zavatra inoana ary ny fahalalahana ara-pivavahana
Anisan’ny mbola mampanahy any Turkménistan ny hoe mbola gadraina foana ireo tanora Vavolombelon’i Jehovah tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Tsy misy fanompoana sivily azon’izy ireo atao, ary melohina sy sazina higadra herintaona ka hatramin’ny roa taona izy ireo. Indraindray anefa izy ireo mbola ampangaina ho “mpamerin-keloka” indray rehefa avy nafahana, ka apetraka any amin’ny fonja ho an’ny mpanao heloka bevava.
Nandefa fitarainana tany amin’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona (CCPR) * ny Vavolombelona 15, izay voampanga noho izy ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nandefa fitarainana tany koa ny Vavolombelona roa, izay nogadraina satria voampanga ho nanao zavatra tsy nataony. Hita hoe natao hanakantsakanana ny zavatra fanaon’izy ireo mifandray amin’ny fivavahany fotsiny ny fiampangana azy ireo.
Nanao fanamarihana momba ny fanajana ny zon’olombelona any Turkménistan ny CCPR, tamin’ny Aprily 2012. Voalaza teo amin’ny teny famaranana fa “tokony handray ny fepetra rehetra ilaina” ny fanjakana “ka hamerina handinika ny lalàna mba hampanaovana zavatra hafa an’ireo tsy afaka manao miaramila. Tokony hataon’ny fanjakana azo antoka koa hoe voalazan’ny lalàna mazava fa manan-jo tsy hanao miaramila ny olona iray noho ny feon’ny fieritreretany.” Momba ny zavatra atao mifandray amin’ny fivavahana indray, dia mandidy ny fanjakana io tatitra io hoe tokony hataony azo antoka fa “manaja ny zon’ny olona hanaraka ny fivavahany sy hanao zavatra mifanaraka amin’izay inoany ny lalàna momba ny fanoratana ny fikambanana ara-pivavahana ho ara-dalàna sy ny fomba fanaovana an’izany, araka ny voalazan’ilay Fifanarahana.” Ho faly ny Vavolombelona any Turkménistan raha voasoratra ara-dalàna ny fivavahany, satria ho afaka hanaraka an-kalalahana ny fivavahany izy ireo.
Mety hihatsara ny toe-javatra
Manantena ny Vavolombelon’i Jehovah fa hisy vokany tsara ireo zavatra vao haingana nataon’ny fanjakana any Turkménistan. Mety hohajaina kokoa ny zon’olombelona, indrindra fa ny zo hanana fahalalahana hanaraka ny feon’ny fieritreretana sy ny fivavahana ary ny zavatra inoana. Hoy ny mpisolovavan’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Manantena ny Vavolombelon’i Jehovah fa ho afaka ny ahiahin’ny fanjakana eto Turkménistan raha misy fifampiresahana tsara eo amin’ny roa tonta. Hilamina tsara foana ny feon’ny fieritreretan’ny Vavolombelona sy ny fiainany, amin’izay, sady ho afaka hanompo an’Andriamanitra ihany izy ireo.”
Sokafy ity rohy eto ambany ity raha tianao ho hita ny lisitr’ireo Vavolombelon’i Jehovah migadra any Turkménistan:
Gadraina Noho ny Finoany: Turkménistan (PDF amin’ny teny anglisy)
Nomelohina i Bahram Hemdemov satria nanao zavatra mifandray amin’ny fivavahany, ary voaheloka higadra efa-taona. Nosamborina sy notanana am-ponja vonjimaika izy, roa volana talohan’izay.
Nafahana ny Vavolombelon’i Jehovah roa, izay tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
18 Novambra 2014
Vavolombelona roa no migadra satria tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Nahazo famotsoran-keloka avy amin’ny Filoham-pirenen’i Turkménistan ny Vavolombelon’i Jehovah valo ka nafahana.
Vavolombelona sivy no gadraina: Ny fito tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, ary ny roa namoronana fiampangana mba hanasaziana azy ireo noho izy ireo nanao zavatra mifandray amin’ny fivavahany.
2 Septambra 2014
Nafahan’ny manam-pahefana any Turkménistan i Bibi Rahmanova, ary novana ho sazy mihantona ilay saziny higadra efa-taona.
Namoronana fiampangana i Bibi Rahmanova ka voasazy higadra efa-taona.
Vavolombelona fito no gadraina: Ny dimy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, ary ny roa namoronana fiampangana mba hanasaziana azy ireo noho izy ireo nanao zavatra mifandray amin’ny fivavahany.
6 Aprily 2014
Vavolombelona 26 no nosamborina, ka ny 13 tsy ananana porofo akory hoe nahavita heloka. Nampandoavina lamandy kosa ny 13.
Mbola migadra ny Vavolombelon’i Jehovah sivy: Ny valo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, ary ny iray namoronana fiampangana mba hanasaziana azy noho izy nanao zavatra mifandray amin’ny fivavahany.
29 Aogositra 2013
Vavolombelon’i Jehovah telo no nandefa fitarainana tany amin’ny CCPR satria tsy nohajain’i Turkménistan ny zon’izy ireo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Vavolombelon’i Jehovah roa no nandefa fitarainana tany amin’ny CCPR satria tsy nohajain’i Turkménistan ny zon’izy ireo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Nanao bemidina tao amin’ny tranon’i Navruz Nasyrlayev ny polisy 30, herinandro vitsivitsy taorian’ny niresahan’ny CCPR tamin’ny fanjakana any Turkménistan momba ny fitarainana voarainy. Nokapohin’ny polisy imbetsaka ilay fianakaviana sy ny vahinin’izy ireo.
7 Septambra 2012
Vavolombelon’i Jehovah folo no nandefa fitarainana tany amin’ny CCPR satria tsy nohajain’i Turkménistan ny zon’izy ireo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. I Navruz Nasyrlayev no nitarika an’ilay izy.
21 Aogositra 2008
Nangataka ny Vavolombelon’i Jehovah mba hosoratana ara-dalàna ny fivavahan’izy ireo any Turkménistan.
^ feh. 2 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Nafahana Ireo Vavolombelon’i Jehovah Nogadraina Tany Turkménistan”
^ feh. 2 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Nafahana Ilay Renim-pianakaviana any Turkménistan”
^ feh. 6 Io komity antsoina hoe CCPR io no manara-maso ny fampiharana ny Fifanarahana Iraisam-pirenena Momba ny Zo Sivily sy Politika (ICCPR). Niditra tao amin’io Fifanarahana io i Turkménistan, tamin’ny 1997, sady nanaiky hanaraka an’ilay lalàna voalohany ao.